[VOAVAHA] NY TANJAKA FAMANTARANA WIFI AMBANY TAORIAN'NY FANAVAOZANA NY WINDOWS 10 OKTOBRA 2020 (VERSION 20H2) - WINDOWS 10
[Voavaha] ny tanjaka famantarana WiFi ambany taorian'ny fanavaozana ny Windows 10 Oktobra 2020 (Version 20H2)
Mpampiasa maromaro no manao tatitra herin'ny signal wifi ambany aorian'ny fametrahana windows 10 Oktobra 2020 Vaovao farany 20H2. Araka ny nolazain'ny mpampiasa Taorian'ny fanavaozana ny windows 10 vao tsy ela na nametraka fanavaozana ny fitomboan'ny tsindry wifi dia nitontongana be. Ankehitriny Wifi Connected fa ny tanjaky ny fifandraisana dia kely dia kely satria bar iray ihany no azoko ary indraindray ny wifi-ko dia tsy mahita akory ny router-ko. Ny olana dia nanomboka taorian'ny fanavaozana ny windows 10 version 20H2 toy ny talohan'io Laptop io ihany dia mahazo ny signal WiFi feno avy amin'ilay Router (tambajotra) iray ihany.
Hevitra ato Anatiny FAMPISEHOANA 1 Amboary ny signal wifi malemy aorian'ny fanavaozana ny windows 10 1.1 Mihazakazaha troubleshooter Network / WiFi Adapter 1.2 Fanavaozana / Atsaharo ny mpamily WiFi Adapter 1.3 Ovao ny sanda Sensibility 1.4 Hanova ny maody fampisehoana ambony indrindra an'ny adapter Network 1.5 Vonoy vonjimaika ny firewall 1.6 Safidy famerenana Network
Amboary ny signal wifi malemy aorian'ny fanavaozana ny windows 10
Matetika izany dia mitranga rehefa avy amina fanavaozana na fametrahana indray ianao, izay mila havaozina ny mpamily adapter tambajotra napetraka amin'izao fotoana izao, tsy mifanaraka amin'ny kinova fikandrana misy ankehitriny. Mbola diso indray ny fikirakirana tambajotra na olana amin'ny WiFi Adapter, router Wireless sns herin'ny signal wifi ambany amin'ny Windows 10 Laptop.
Voalohany indrindra, alao antoka fa eo akaikin'ny Router WiFi ny Laptop-nao, ary koa Avereno indray mandeha ny router sy ny Laptop ary jereo fa misy fihatsarana amin'ny fambara WiFi.
Mihazakazaha troubleshooter Network / WiFi Adapter
Raha lavorary ny elanelana WiFi sy ny signal, Ary ilay laptop-na iray ihany, ny router dia mahazo ny fifandraisana alohan'ny fanavaozana ny windows ary manomboka ny olana vao tsy ela akory izay, avy eo misy ny fiovana sasany azo ovaina raha ny fizotran'ny fanavaozana, na ny bibikely fanavaozana hafa izay mahatonga ny olana .
Alefaso ny troubleshooter Network Adapter avy amin'ny Settings (Windows + I). safidio ny Fanavaozana & Fiarovana, kitiho ny troubleshoot ary eo amin'ny tontonana afovoany izay safidio Network adapter. Kitiho ny Run troubleshooter hahafahan'i Windows mahita sy manamboatra olana amin'ireo adapter tsy misy tariby sy tambajotra hafa.
Mety mila fotoana fohy ny fampandehanana ilay troubleshooter ary rehefa vita izany dia hasehony anao ny olana rehetra amin'ny adapter tambajotrao. Hamboarina ihany koa izy ireo any aoriana, saingy misy ihany ny olana sasany izay mitaky hetsika tanana.
Aorian'izany eo amin'ilay varavarankely famahana olana iray ihany dia kitiho ny Hardware sy Device ary alefaso ilay troubleshooter hanamarina sy hahazoana antoka fa ny WiFi Adapter dia tsy nahatonga ilay olana. Aorian'ny famaranana, hamerina ny varavarankely ny fizotran'ny fikaroham-bahaolana ary zahao ny WiFi mifandraika amin'ny famantarana hery feno.
Fanavaozana / Atsaharo ny mpamily WiFi Adapter
Araka ny efa noresahina teo aloha, ny mpamily adaptatera WiFi tsy mifanaraka, simba indrindra no mahatonga an'ity karazana olana ity. Vaovao farany na avereno apetraka ilay mpamily WiFi Adapter farany eo amin'ny rafitrao ary amboary ny olana.
Mihidy avy hatrany ny rindrambaiko Windows 10 aorian'ny fisokafana
Tsindrio Windows + R, karazana devmgmt.msc hanokatra Device Manager.
Eto manitatra adaptatera tambajotra, ary tadiavo ny adaptatera WiFi anao, tsindrio indroa eo aminy hanokafana ny fananany.
Mifindra amin'ny takelaka mpamily ankehitriny izay ahitanao ny hetsika rehetra (fanavaozana, Rollback, esory) mifandraika amin'ny Drivers.
Raha nanomboka ny olana taorian'ny fanavaozana ny mpamily WiFi vao haingana / fanavaozana ny Windows dia ho hitanao ilay Rollback safidy. Andramo ity safidy ity hamerenana ny mpamily WiFi amin'ny kinova taloha, izay iasan'ny WiFi Signal mandeha tsara.
Raha tsy misy ny safidin'ny Rollback dia kitiho ny Update Driver, mitady automatique ireo rindrambaiko mpamily nohavaozina ary araho ny torolàlana an-tserasera mba hamela ny varavarankely misintona sy mametraka ny mpamily WiFi misy farany indrindra amin'ny Systemo.
Raha tsy izany dia tsidiho ny tranokalan'ny mpanamboatra fitaovana (tranokala mpanamboatra laptop Dell, HP, Lenovo, Asus sns. Na raha mampiasa WiFi Adapter any ivelany ianao dia tsidiho ny tranokalan'ny mpanamboatra WiFi) Ampidino ary tahirizo ny kinova farany misy ny mpamily. Avy eo amin'ny manager manager, esory ny mpamily efa napetraka ankehitriny, Restart windows ary apetraho ilay mpamily farany, sintomy avy eo amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra. Avereno jerena indray ireo varavarankely ary zahao ny olana momba ny signal wifi malemy 10 voavaha.
Ovao ny sanda Sensibility
Ity olana Wi-Fi ity dia mety vokatry ny mpamily tsy misy tariby na olan'ny herinaratra. Andao hiezaka ny hanova ny toe-javatra tsy misy tariby mba hanampy hamahana ilay olana. Araho ny dingana eto ambany:
Sokafy Device Manager.
Tsindrio ny zana-tsipìka eo akaikin'ny adaptatera Network.
Kitiho havanana ny fananana voafantina Wireless Network Adapter ,
Mandehana any amin'ny Advanced kiheba
Safidio ny safidy voalohany izay ny 8.02.11d Safidio, avy eo ovao ny sanda ho afaka .
tadiavo ny Roaming Sensitivity Level ary ovao ny sanda ho avo indrindra
tsindrio ok .
Hanova ny maody fampisehoana ambony indrindra an'ny adapter Network
Matetika, amin'ny alàlan'ny default, ireo adaptatera tsy misy tariby dia napetraka hiasa amin'ny maodely fampisehoana sy fomba fitehirizana herinaratra ho fahombiazana bebe kokoa. Andao ovaintsika amin'ny fahombiazana farany mety hampisondrotra ny tanjaky ny signal WiFi.
tsindrio fanombohana ary manorata “ Amboary ny drafitry ny herinaratra. “ Tsindrio eo.
Manaraka, tsindrio ny “ Ovay ny fikirakirana herinaratra mandroso. “
Under Fikirana mandroso, mahita “ Fikirana adaptatera tsy misy tariby. “
Avy eo ambanin'ny ' Fomba fitehirizana herinaratra, ”Kitiho ny“ Fampisehoana farany ambony indrindra. “ tsindrio Ok .
Vonoy vonjimaika ny firewall
Indraindray ny rindrambaiko firewall dia mety hanakana anao tsy hifandray. Azonao atao ny mahita raha toa ny firewall amin'ny alàlan'ny famonoana azy vonjimaika ny olana eo amin'ny fifandraisana ary avy eo manandrana mitsidika tranonkala iray itokisanao.
Ireo dingana hamono firewall dia miankina amin'ny rindrambaiko firewall ampiasainao. Zahao ny antontan-taratasy momba ny rindrambaiko firewall anao hianaranao ny fomba hamonoana azy. Azafady mba alao antoka fa averinao haingana araka izay tratranao izany. Ny tsy famohana ny firewall dia mahatonga ny PC ho mora tohina amin'ireo hackers, kankana, na virus.
Raha manana olana ianao amin'ny famonoana ny firewall anao dia ataovy ity manaraka ity mba hamonoana ireo rindrambaiko firewall rehetra mandeha amin'ny PC-nao. Avereno antoka indray fa averinao haingana ny firewall anao raha vantany vao azonao atao.
Ny famonoana ny firewall rehetra
Ao amin'ny boaty fikarohana ao amin'ny bara fizahana, karazana Mandehana haingana , kitiho ary tazomy (na tsindrio havanana) Mandehana haingana , ary safidio Mihazakazaha ho mpandrindra > ENY .
Ao amin'ny prompt command, type netsh advfirewall nanala ny fanjakana rehetra , ary avy eo manindry Ampidiro .
Sokafy ny tranokalanao ary zahao ny tranokala atokisanao ary jereo raha afaka mifandray aminy ianao.
Raha te-handrehitra ny firewall rehetra mety napetrakao, soraty amin'ny prompt ny baiko netsh advfirewall nametraka fanjakana rehetra , ary avy eo manindry Ampidiro .
Raha hitanao fa ny rindrambaiko firewall dia miteraka olana eo amin'ny fifandraisana, mifandraisa amin'ny mpanamboatra rindrambaiko na tsidiho ny tranonkalany hijerena ary hahitana raha misy rindrambaiko nohavaozina.
Safidy famerenana Network
Raha mampiasa ny Windows 10 kinova farany 20H2 ianao ary aorian'izay dia mety hahazo safidy famerenana tambajotra ianao, manampy amin'ny famahana ny olana izany ary miverina mifandray amin'ny tambajotra WiFi.
Izy io dia manala ireo mpampifanaraka tambajotra napetrakao sy ireo toerana anaovana azy. Aorian'ny famerenan'ny PC anao dia apetraka indray ireo mpampifanaraka tambajotra ary apetrakao amin'ny tsy fetezana ny fikirana ho azy ireo. Mba hanatanterahana ny tamba-jotra Reset Press Windows + I hanokatra setting> Network & Internet> Status> Network Reset.
Ao amin'ny efijery reset Network, safidio ny Reset now> Eny hanamafisana. Andraso ny PC hanombohana indray ary jereo raha manamboatra ilay olana izany.
alefaso ny vaovao farany Windows 10 home
Moa ve ireo vahaolana ireo nanampy tamin'ny famahana ny olana 'WiFi low power signal' olana mifandraika tahaka ny teo aloha tamin'ny herin'ny signal feno? Ampahafantaro anay izay safidy mety aminao
Vahaolana: olana momba ny freeze an'ny Windows 10 sy ny lozam-pifamoivoizana
Voavaha: Chromecast Tsy Miasa amin'ny Windows 10
Vahaolana 7 hamahana ny Windows 10 tsy afaka mifandray amin'ity tamba-jotra ity (WiFi)
5 dingana tsotra hamahana ny olana amin'ny fifandraisana eo amin'ny tambajotra amin'ny Windows 10
totozy tsy mandeha aorian'ny fanavaozana ny windows 10
Ny windows 10 internet dia manakana hatrany
mijanona amin'ny 99 ny fampidinana windows 10
Tsy mandeha ny rindrambaiko windows netflix
Windows 10 tsy hikatona aorian'ny fanavaozana
wifi manapaka tsy tapaka ny windows 10